Vaovao - Notsipahin'ireo mpanao fihetsiketsehana UK ny sarivongan'ny mpivarotra andevo tamin'ny taonjato faha-17 tao Bristol
LONDON - Sarivongan'ny mpivarotra andevo tamin'ny taonjato faha-17 tao amin'ny tanànan'ny Britanika atsimon'i Bristol no notarihin'ireo mpanao fihetsiketsehana "Black Lives Matter" ny alahady teo.
Lahatsary tao amin'ny media sosialy dia nampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana nandrovitra ny endrik'i Edward Colston tamin'ny latabatra nataony nandritra ny fihetsiketsehana tao afovoan-tanàna. Tao anaty horonantsary iray taty aoriana, dia hita nanipy izany tao amin'ny Reniranon'i Avon ireo mpanao fihetsiketsehana.
Ny sarivongana varahina an'i Colston, izay niasa tao amin'ny Royal African Company ary taty aoriana dia solombavambahoakan'i Tory ho an'i Bristol, dia nijoro teo afovoan-tanàna nanomboka tamin'ny 1895, ary nanjary resabe tao anatin'ny taona vitsivitsy taorian'ny nilazan'ny mpanao fampielezan-kevitra fa tsy tokony hatao ampahibemaso izy. eken'ny tanàna.
Protester John McAllister, 71 taona, nilaza tamin'ny haino aman-jery tany an-toerana: “Mpivarotra andevo io lehilahy io. Malala-tanana tamin'i Bristol izy fa tsy tao ambadiky ny fanandevozana izany ary fanamavoana tanteraka. Fanompana ny mponin'i Bristol izany. ”
Ny mpitantana ny polisy any an-toerana Andy Bennett dia nilaza fa olona 10.000 no nanatrika ny fihetsiketsehana Black Lives Matter tao Bristol ary ny maro an'isa dia nanao izany tamim-pilaminana. Na izany aza, "nisy vondron'olona vitsivitsy izay mazava fa nanao asa ratsy tamin'ny fikatsoana sarivongana teo akaikin'i Bristol Harbourside," hoy izy.
Nilaza i Bennett fa hisy ny famotopotorana hahafantarana ireo voakasik'izany.
Tamin'ny Alahady, olona an'aliny no nanatevin-daharana ny andro faharoa tamin'ny fanoherana ny fanavakavaham-bolon-koditra tany amin'ny tanàn-dehibe anglisy, anisan'izany i London, Manchester, Cardiff, Leicester ary Sheffield.
Vahoaka an'arivony no nivory tany Londres, ny ankamaroany dia manarona tarehy ary maro ny fonon-tànana, hoy ny tatitry ny BBC.
Tamin'ny fihetsiketsehana iray izay natao tany ivelan'ny masoivoho amerikanina tao afovoan'i Londres, dia niankohoka ny loholona iray ary nanangana ny totohondriny teny amin'ny habakabaka noho ny fiantsoana ny “fahanginana dia herisetra” ary “tsy heloka ny loko,” hoy ny tatitra.
Tamin'ny fihetsiketsehana hafa, nisy mpanao fihetsiketsehana nitana fambara nanondro coronavirus, anisan'izany ny iray izay mivaky toy izao: “Misy viriosy lehibe kokoa noho ny COVID-19 ary antsoina hoe fanavakavahana izany.” Nandohalika nandritra ny iray minitra ireo mpanao fihetsiketsehana alohan'ny niantsoan'izy ireo hoe “tsy misy fahamarinana, tsy misy fandriampahalemana” ary “olana ny fiainana mainty,” hoy i BBC.
Ny hetsi-panoherana tany Angletera dia ampahany tamin'ny hetsi-panoherana goavana eran'izao tontolo izao vokatry ny famonoan'ny polisy an'i George Floyd, Afrikanina amerikana tsy mitam-piadiana.
Floyd, 46 taona, dia maty ny 25 Mey tao Minneapolis, tanàna amerikana, rehefa nandohalika teo amin'ny hatony ny polisy fotsy iray nandritra ny sivy minitra teo am-pelatanana nikirakira ary nilaza hatrany fa tsy afaka miaina.
Fotoana fandefasana: Jul-25-2020